တစ်ဦးကား Pattaya ငှားရမ်း | တစ်ဦးကားကလပ်ငှားရမ်း
Pattaya ကားတစ်စီးငှားရမ်း Pattaya
ပတ္တရား, ထိုင်းအများစုသမိုင်းကြောင်းအကြွယ်ဝသောနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောမြို့များ ofthe တစ်ဦးအဖြစ်အသစ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုရှာသောကမ္ဘာတဝှမ်း touristsfrom ဆွဲဆောင်။ အဆိုပါပတ္တရားညာဘက်ဘန်ကောက်ပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် secondmost သွားရောက်ခဲ့ပြီးမြို့ဖြစ်၏။ အများဆုံး significantattractions တစ်ခုမှာကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်နဂိုအတိုင်းသဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ ပတ္တရားကမ်းခြေလမ်းနှင့်သုံးကမ်းလွန်ကျွန်းများ, Ko Larn, KoSak နှင့်ဦးဖြစ်သူကို Krok Walking မှပတ္တရား Nuea ထံမှ thatextends ရုံဖော်ပြရကျိုးနပ်အံ့ဘွယ်သောအတချို့ရှိနေပါတယ်။
ပတ္တရား၏ thecity အကျိုးရှိစွာနှင့်ကွဲပြားခြားနားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကစောင့်ထိန်းပေမယ့်, လမ်းများန်းကျင်ကိုအကောင်းဆုံး wayto ခရုဇ်ကားတစ်စီးနှငျ့အတူရှိ၏။ ခရီးသွားဧည့်အဖြစ်ဒေသခံတွေ, ဒီ 8.6 စတုရန်းမိုင်မြို့ကမ်းလှမ်းမှုအငှားဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်အားကိုး။ ရိုးရှင်းစွာအလွတ်လပ်မှုနှင့်အတူလှည့်ပတ်မောင်းတစ်ဦး foreigncountry သွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာအားလုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလိုအပ်နေပါသည်ဖြစ်ပါသည်, ကဆိုသည်။
Fortunateenough တစ်ကားကလပ်ပတ္တရား၏မြို့အပါအဝင်ထိုင်းနိုင်ငံ thewhole တိုင်းပြည်န်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်ငှားရမ်း။ ဤသည် rentalservice ကိုက်ညီလူတိုင်းရဲ့ personalneeds ဖြည့်တင်းကြောင်းမော်တော်ယာဉ်များ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။ သင်တစ်ဦးတည်းခရီးသွားနေကြသည်ဖြစ်စေ, ယခုသင်လုပ်နိုင်သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်အတူငှား၏အကူအညီပတ္တရားအတွက်ကားကလပ်နှင့်အတူယခုသင်တစ်ဦး affordableprice မိုဘိုင်းဖြစ်ခြင်း၏ကျေးဇူးတော်ခံစားနိုင်။
ပတ္တရားအတွက် arental ကားတစ်စီးစာအုပ်ဆိုင်မှဘယ်လိုနေသလဲ?
ဖြစ်စဉ်ကို thebooking စတင်ရန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, သင်ပြုရန်ရှိသည်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသင့်ရဲ့ပစ်ကပ် andreturn တည်နေရာတောင်းဆိုပါသည်သောအပိုင်းဖြစ်ပြီး, ကားအသုံးပြုမှုများသင်တန်းတစ်ခုတိကျအချိန်ကာလကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်မစာမျက်နှာပေါ်တွင် "ယခုဘွတ်ကင်" ကိုနှိပ်ပါဖြစ်ပါတယ်။ Youmay တစ်ကားကလပ်ရဲ့ဖောက်သည် friendlypolicy ငှားရမ်းထင်ဟပ်သောအလွန်အောက်ခြေရှိအမြှင့်တင်ရေးကုဒ် bar ကိုသတိထားမိ။ သင်စာအုပ်အခုတော့ button ကို click နှိပ်တဲ့အခါ, ဆိုက်ချက်ချင်းသင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီကနေရှေးခယျြနိုငျကွောငျး youvehicle ရွေးချယ်စရာကိုငါပေးမည်။
ပတ္တရားအများစုသည် commonpick-up, နေရာများတွင်နေသောခေါင်းစဉ်:
မည်သည့် otherrental ဝန်ဆောင်မှုသကဲ့သို့, ငှားတဲ့ကားကလပ်ကိုလည်းယင်း၏ငှားရမ်းရေးမူဝါဒရှိပြီးဖောက်သည်တစ်ဦးတစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်ငှားရမ်း tosuccessfully ဖြည့်ဆည်းဖို့ရှိပါတယ်အုပ်စိုး။ ဤတွင်ယေဘုယျလိုအပ်ချက်များစာရင်းကိုသည်:
နိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ် is21 နှစ်ပေါင်း။
အထောက်အထား ofidentification (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ် ID ကိုကဒ်) ။
လိုင်စင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာမောင်းနှင်မှုမစ် Domesticdriving ။
တစ်ဦးက (validcredit ကဒ်) ။
ဘယ်လိုငှားပတ္တရားအတွက်ကားကလပ်ယှဉ်ပြိုင်အကြားထွက်မတ်တပ်ရပ်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအမေရိကန်ကိုရှေးခယျြ whyshould သနည်း? ကောင်းပြီ, ဒီမှာကားတစ်စီးကလပ်သင်သည်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်ငှားရမ်းသောအကြိုးကြေးဇူးမြား၏အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ပတ္တရား, Chonburi, ရယောင်, ဖူးခက်, ချင်းမိုင်နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင်အများအပြားပိုပြီးပြည်နယ်၏မြို့အပါအဝင်အားလုံးထိုင်းကျော်အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားအကိုင်းအခက် havenumerous ။
ဤတွင်ငှားတဲ့ကားကကလပ်မှာ, ကျနော်တို့ဘွတ်ကင်ဖြစ်စဉ်ကိုစူပါလွယ်ကူသောကြောင့်ရေတွင်းတစ်တွင်း-designedwebsite ရှိသည်။
ကျနော်တို့တိုင်းအခါသမယ (ကိုယ်ပိုင်နှင့်မိသားစုရည်ရွယ်ချက်) အတွက် carssuitable ကိုဆက်ကပ်။
ကျနော်တို့ရိုးသားမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရအပေါ် prideourselves ။
U နောက်ဆုံးဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အကျိုးရှိစွာနှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေအွန်လိုင်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပူဇော် notleast ။